Ixabiso eliphantsi le-SNCB yoLoliwe kunye namaxabiso okuhamba | Gcina A Isitimela
Ixabiso eliphantsi le-SNCB yoLoliwe kunye namaxabiso okuhamba
ekhaya > Ixabiso eliphantsi le-SNCB yoLoliwe kunye namaxabiso okuhamba
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti etreyini amaxabiso aphantsi eSNCB yaye Amaxabiso okuhamba e-SNCB kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-SNCB ngeeNgcaciso zoLoliwe
2. Malunga neSNCB 3. Ingcaciso ephezulu yokufumana iTikiti lamaxabiso aphantsi leSNCB loTikiti
4. Ixabisa malini iitikiti zeSNCB 5. Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-SNCB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Nguwuphi umahluko phakathi kweklasi yokuqala neyesibini? 7. Ngaba kukho ukubhaliswa kwe-SNCB
8. Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba i-SNCB ifike 9. Ithini ithayimthebhile yoololiwe yeSNCB
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-SNCB 11. I-FAQ ye-SNCB
I-SNCB ngeeNgcaciso zoLoliwe
Inkampani yesizwe yoololiwe, I-SNCB, uyasebenza 244 abakhweli abazizigidi ngonyaka.
Yonke imihla, inkampani yesizwe yoololiwe ithatha 61 amawaka abantu ngaphakathi kweBelgium nakwiindawo abaya kuzo kwiYurophu iphela.
Inkampani yesizwe kaloliwe yeyona nkonzo inkulu yokuhambahamba kwilizwe laseBelgium.
Inkampani yeSizwe yoololiwe yaseBelgium, I-SNCB, yasekwa kwi 1926.
Izibonelelo zeSNCB iinkonzo zikaloliwe ngaphakathi kweBelgium nakwiYurophu iphela. Ngetikiti elifanelekileyo, ungandwendwela konke okuhle iindawo zeholide eYurophu. Ngamacandelo ohlukeneyo amatikiti kunye nokubhaliswa kwekhadi, I-SNCB ibonelela ngeemfuno zomntu wonke.
Oololiwe bahlala rhoqo eBrussels – eGhent, Antwerp – wasebenzisa, EBrussels – Namur. Unokufika nakumazwe angabamelwane aseYurophu usebenzisa oololiwe be-SNCB.
Ngaphesheya kombutho, isondele kwi 20,000 Abasebenzi abasebenza kumgaqo kaloliwe nakubhasi beebhasi baqinisekisa ukuba abakhweli bafikelela ngokukhuselekileyo kwiindawo abaya kuzo yonke imihla.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela Uqeqesha amatikiti eSNCB
– Gcina iTreyini iPhone App
Ingcaciso ephezulu yokufumana iTikiti lamaxabiso aphantsi leSNCB loTikiti
inombolo 1: Odola amatikiti akho eSNCB kwangaphambili kangangoko unakho
Ixabiso Iitikiti zikaloliwe zeSNCB kuphakama njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ungazigcinela imali ngokubhukisha amatikiti etreyini e-SNCB kude kangangoko kunokwenzeka kusuku lokunduluka. Amatikiti etreyini e-SNCB ayekhona kwangoko 3 ukuba 6 kwiinyanga ezingaphambi kokuba ahambe ngololiwe. Ukubhukisha kwangethuba kuqinisekisa ukuba ufumana ezona ndleko zisebenzisayo zeSNCB. Banqunyelwe nenani, kwangoko uyalela, Ixabiso eliphantsi kuwe. Ukugcina imali kwiitikiti zikaloliwe zeSNCB, thenga amatikiti akho ASAP.
inombolo 2: Ukuhamba nge-SNCB ngexesha lokuhamba
Iitikiti zikaloliwe zeSNCB zitshiphu ngexesha lamaxesha okuncamathela, ekuqaleni kweveki, kwaye ngexesha lasemini. Unokuqiniseka ukuba uyifumana amatikiti etreyini ingabizi phakathi evekini. Ngolwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine, Iitikiti zikaloliwe zeSNCB zezona zoqoqosho. Ngenxa yomthamo wabahambi abahamba ngebhizinisi besiya emsebenzini kusasa nangokuhlwa, amatikiti etreyini abiza ngaphezulu ngezo yure. Kubiza ixabiso eliphantsi kakhulu ukuhamba ngalo naliphi na ixesha phakathi kwentsasa nangaphambi kokuhlwa. Ngeempelaveki lelinye ixesha eliphakamileyo loololiwe, ngakumbi ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. Amaxabiso etikiti likaloliwe i-SNCB nawo ayenyuka iiholide zikawonke-wonke kunye neeholide zesikolo.
inombolo 3: Odola amatikiti akho eSNCB xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yohambo
Oololiwe be-SNCB Bafunwa kakhulu, kwaye nokhuphiswano oluncinci, Okwangoku bahlala bezona zikhetho ziphambili koololiwe eBelgium. I-SNCB inokukwazi ukuseta izithintelo zetikiti likaloliwe njengaleyo ethintela ukutshintshwa kwetikiti okanye ukubuyiselwa imali ngaphandle kokuba luhlobo lweshishini lwetikiti. Nangona kusekho iwebhusayithi yeeforum apho ungathengisa khona amatikiti asebenzisana nabantu, I-SNCB ayikuvumeli ukuthengiswa kwetikiti lesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
inombolo 4: Thenga itikiti lakho le-SNCB kuGcina uloliwe
Gcina uloliwe ngowona mkhulu, egqibelele, kunye nezona ndleko zixabiso eliphantsi kwitikiti laseYurophu. Ubudlelwane bethu nabaqhubi kaloliwe abaninzi, imithombo yamatikiti kaloliwe, kwaye ulwazi lwethu ubuchwephesha ubuchule ukunika Gcina A Isitimela ukufikelela kweyona lixabiso lixabisa itikiti uloliwe. Asiboneleli nje ngexabiso eliphantsi lokuthenga amatikiti e-SNCB kuphela; sibonelela ngokufanayo kwezinye iindlela ezizezinye kwi-SNCB kwaye siyazingca ngeyona nkonzo ibalaseleyo yabathengi kwimarike kaloliwe.
IBrussels ukuya kwiAntwerp Amaxabiso oololiwe
IAmsterdam ukuya kwiAntwerp Amaxabiso oololiwe
ILille ukuya kwiAntwerp Amaxabiso oololiwe
EParis ukuya kwiAntwerp Amaxabiso oololiwe
Ixabisa malini iitikiti zeSNCB?
Amatikiti e-SNCB aqala ukusuka kwi-2,5 Euro ukuya kuthi ga kwi-20 euros kuhambo olunye lukaloliwe. the Ixabiso letikiti likaloliwe leSNCB kuxhomekeka kuhlobo luni lwetikiti olithengayo kunye nokuba ukhetha ukuhamba nini:
Imigangatho € 2,50 – € 15.00 € 15 – € 30
Iklasi yokuqala € 10.50 – € 20 € 21 – € 46
Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-SNCB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
1) Fika kwiZiko leSixeko. Le yenye yeendlela eziluncedo zoololiwe be-SNCB xa kuthelekiswa neenqwelo moya. Oololiwe be-SNCB kunye Lonke olunye uhambo ngololiwe naphi na kwi isixeko embindini yesixeko esilandelayo. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, EBrussels, Antwerp, wasebenzisa, okanye eLiege, Ukuma kwiziko lesixeko kuluncedo olukhulu koololiwe beSNCB!
2) Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kufuna ukuba ube kwisikhululo seenqwelomoya ubuncinci iiyure ezininzi ngaphambi kwexesha lakho lokubhabha. Kuya kufuneka ukhangele ukhuseleko ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuba ukhwele inqwelomoya. Ngoololiwe be-SNCB, Kufuneka ube kwisikhululo ngaphantsi 30 imizuzu ngaphambi kwexesha. Xa ujonge nexesha ekuthatha ngalo ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko, uyakuqonda ukuba oololiwe be-SNCB bangcono ngokwemiqathango ixesha lilonke lokuhamba.
3) Kumphezulu, Ixabiso leetikiti zikaloliwe ze-SNCB zibonakala zibiza kakhulu kuneetikiti zomoya zebhajethi. kunjalo, xa uthelekisa zonke iintlawulo ezichaphazelekayo, Iitikiti zikaloliwe ze-SNCB zinexabiso elingcono. Ngezinye iindleko ezinjengemirhumo yemithwalo ekungafuneki ukuba uyihlawule koololiwe, uhamba ngeSNCB ngokuqinisekileyo yeyona ilungileyo.
4) Oololiwe banobuhlobo ngakumbi xa uthelekisa oololiwe kunye neenqwelo moya, oololiwe babephuma eqongeni. Iinqwelomoya iindiza ziwungcolisa umoya ubushushu bawo ngamanqanaba aphezulu ekhabhoni ayinikelayo. Oololiwe xa kuthelekiswa banika okuninzi ngaphantsi kongcoliseko lwekhabhoni kuneenqwelomoya.
Nguwuphi umahluko phakathi kweklasi yokuqala neyesibini?
Kukho iindidi ezahlukeneyo zeetikiti zeSNCB kuhlahlo-lwabiwo mali olwahlukeneyo kunye neendidi zabahambi. Ungathenga itikiti eliqhelekileyo leklasi ye-1 okanye yesibini. Njengokuba, iklasi ye-2 iya kulungela ngcono kuhambo olude kwaye abahambi mali. Kodwa ukuba ujonga indawo yokolula imilenze yakho okanye uyi Umhambi kwezoshishino kwaye ndifuna ukusebenza ngelixa useluhambeni, ke iklasi yokuqala ikulungele.
Ngaba kukho ukubhaliswa kwe-SNCB?
Kubemi baseBelgium, kukho iintlobo ezahlukeneyo zokubhaliselwa, itikiti Unlimited Unyaka, kunye neXesha eliMiselweyo. Kwamazwe aphesheya sicebisa ukuba uthenge ixesha elide kwangaphambili kwaye emva koko uya kuba neyona ndlela inexabiso eliphantsi.
Omabini la makhadi anokuthengwa nge:
– Izinto zokubala zamatikiti eSNCB.
– Usetyenziso lweSNCB.
Amatikiti eSNCB aqhelekileyo:
Itikiti eliqhelekileyo lelona tikiti liguquguqukayo kuloliwe elinikwa yiSNCB. Ngaloo ndlela, unokuhamba naphi na eBelgium kunye netikiti zikaloliwe eziqhelekileyo. Kuya kufuneka uqaphele ukuba amatikiti esiqhelo athengwe kwi-Intanethi, ayinakubuyiselwa. kunjalo, ukuba lukhona utshintsho kwizicwangciso, unokubuyisa imali okanye utshintshe itikiti kwindawo yokubala itikiti. Ukwengeza, le nkonzo iyafumaneka, usuku ngaphambi komhla wokuhamba kwakho, okanye 30 imizuzu emva kokuba uthenge itikiti.
Itikiti elikhulu losapho
Onke amalungu osapho anokuzonwabisa ngezaphulelo kwiitikiti zeSNCB. Umzekelo, abantwana abangaphantsi 12 hamba simahla, ukuya kuthi ga 50% kumatikiti aqhelekileyo abantu abadala nabantwana ngaphezulu 12. Ngaphezu, ngale tikiti, ungahamba ngoololiwe bonke be-SNCB.
Eli khadi lisebenza ngokudibeneyo nekhadi lokuchonga iifoto, ekufuneka ibandakanye ubudala bokubamba.
Itikiti leXesha eliMiselweyo
Abemi baseBelgium banokuthenga iTikiti eliMiselweyo leSizini, kwaye wonwabele uhambo olungenamda kwindlela efanayo. Ngamanye amazwi, ngexabiso le 10 umrhumo weenyanga, banokuhamba kumacala omabini amaxesha amaninzi kangangoko banqwenela.
Itikiti lempelaveki lisebenza ngolwesiHlanu-NgeCawa, nge 50% isaphulelo nakweyiphi na indawo eBelgium. ke, ukuqala e 7 emva kwemini ngoLwesihlanu, ungahamba naphi na kwiBelgium, kwiklasi yoku-1 okanye yesi-2. Ukwengeza, la magama akhethekileyo anabela kwi iholide yasekuhlaleni njengokuba.
IBrussels ukuya eGhent amaxabiso oQeqesho
I-Antwerp ukuya eGhent amaxabiso oololiwe
IHalle ukuya eGhent Amaxabiso oQeqesho
AmaBruges eGhent amaxabiso oQeqesho
Kuthatha ixesha elingakanani ngaphambi kokuba i-SNCB ifike?
Kunzima ukuchaneka ngokuchanekileyo, kodwa Gcina A Isitimela icebisa ukuba ufike malunga 30 imizuzu ngaphambi kwexesha lakho lokuhamba. Ngeli xesha libekiweyo, uya kuba nexesha elaneleyo lokuthenga izinto ekufuneka uzenzile yenza uhambo lwakho ngololiwe bekhululekile kangangoko.
Ithini ithayimthebhile yoololiwe yeSNCB?
Ungafumanisa ngexesha lokwenyani kwiphepha lethu lasekhaya Gcina A Isitimela Ithayimthebhile yoQeqesho lweSNCB, Chwetheza kwindawo yakho yangoku kunye nendawo oyifunayo, kwaye singakubonisa ulwazi.
IBrussels ukuya kumaXabiso oLoliwe amaLiege
I-Antwerp ukuya kumaxabiso oololiwe eDinant
IGhent ukuya kumaxabiso oqeqesho lweDinant
Liege to Dinant Train Amaxabiso
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-SNCB?
Isikhululo se-SNCB saseBrussels yiBrussels – Central, imi kanye entliziyweni yaseBelgium.
Esinye isikhululo esikumbindi se-SNCB siseAntwerp, Oololiwe be-SNCB hamba kwaye ufike kwisikhululo esiyiNtloko saseAntwerp, kufutshane nehotele entle iBlue Astrid. IAntwerp esembindini yi Isikhululo sikaloliwe sesibini esixakekileyo eBelgium.
Oololiwe be-SNCB bemka eGhent ukusuka kwi IGhent Saint Pieters isitishi, esisisixeko sesithathu ngobukhulu eBelgium kunye nesona sikhulu eFlanders.
Liege, Liege I-Guillemins sisikhululo sikaloliwe esiphakathi se-SNCB. ngoko ke, Isikhululo sikaloliwe iLiege sidibanisa iBelgium namazwe angabamelwane, iyenza enye yezona zikhululo zikaloliwe zixakekileyo eWallonia. Ngaphezu, ukuba uceba ukuya eJamani, Fransi , Laksembheg, okanye iNetherlands evela eBelgium, Kungcono ugcine amatikiti etreyini eSNCB kuselithuba.
wasebenzisa (Ibrugge – Igama lesixeko elifanayo kolunye ulwimi oludumileyo) Isikhululo sikaloliwe sesinye isikhululo sikaloliwe esixakekileyo saseSNB eFlanders. Umzekelo, Ukusuka eBruges, Unoku-odola itikiti lakho lololiwe ukuya kwelinye endaweni ethandwa eBelgium: eGhent, Antwerp, neBrussels ngaphantsi kweyure. Isikhululo sikaloliwe saseBruges sise 20 imizuzu yokuhamba umgama ukusuka kumbindi wesixeko, kunye nesikwere esihle seSixeko esiDala saseMarkt.
Isikhululo sikaloliwe se-SNCB eLeuven sesona sikhululo sikaloliwe siphambili kwingingqi yeFlemish Brabant eBelgium. Esi sikhululo sikaloliwe sixakekileyo sidibanisa ummandla weFlemish neminye imimandla kwaye yenye yezona ziphezulu 5 Izikhululo zikaloliwe ezixakeke kakhulu eBelgium. Ngaloo ndlela, Unga zokuhamba train ukuya eBrussels, Isikhululo senqwelomoya saseBrussels, Leuven, Antwerp, kwaye nasiphi na isixeko eBelgium.
Mechelen okanye Malinas, kwisixeko saseMechelen, Isinye sezikhululo zikaloliwe ze-SNCB eseBelgium. Uya kufumana apha 10 amaqonga, ukukhonza imigca yoololiwe be-Intercity, kubandakanya iSikhululo senqwelomoya saseBrussels esivela eAntwerp. Ukwengeza, ungathenga amatikiti akho e-SNCB ukuya eAmsterdam, no Luxembourg, nge-Antwerp naseBrussels.
Ngaba iiBikes zivumelekile kwiBhodi Oololiwe be-SNCB?
Iibhayisikile zivunyelwe koololiwe be-SNCB. Ukuba unebhayisekile esongwayo, emva koko ungakhwela kuloliwe, ngaphandle kweendleko. kunjalo, ezinye iindidi zebhayisikile ziya kukudla i-4 yesongezelelo kwitikiti lakho lololiwe.
Ngaba abantwana bahamba simahla koololiwe be-SNCB?
Ewe, kodwa ukuya kuthi ga kubudala obuthile. Abantwana abancinci kuneminyaka yobudala 12 izohamba simahla xa ikhatshwa ngumntu okhwele abantu abadala.
Ngaba Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe koololiwe be-SNCB?
Ewe, ungazisa isilwanyana sakho kuloliwe, ngee- € 3 ngohambo ngalunye. kunjalo, isilwanyana sasekhaya kufuneka sikhokelwe okanye engxoweni, okanye ibhaskithi.
Zithini iinkqubo zokubhoda zeSNCB?
Ezinye izikhululo zine-elektroniki ezibonisa ukwakhiwa koololiwe. Ngokubhekele phaya, Sebenzisa ezi ukukhangela imimandla apho inani labaqeqeshi boqeqesho liya kuba khona xa kufika uloliwe.
Eyona FAQ iceliweyo ye-SNCB – Ngaba kuya kufuneka ndi-odole isihlalo kwangaphambili kwi-SNCB?
wena unako gcina a ndiyazie ngaphambili ekhaya I-SNCB oololiwe. wena ngeke fumana eyakho isitulo emva kokwenza ugcino, kodwa oku akunyanzelekanga.
Ngaba ikhona i-intanethi ye-Wi-Fi ngaphakathi kwi-SNCB?
Hayi. Akukho free IWi-Fi intanethi koololiwe be-SNCB. Ungayonwabela i-Wi-Fi yasimahla kwizikhululo zikaloliwe zeSNCB.
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku, Uyayazi ngoku yonke into oyifunayo malunga noololiwe bakho be-SNCB kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho loliwe le-SNCB Gcina A Isitimela.
NSB Vy Norway I-SBB Switzerland
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml kwaye ungatshintsha i- / fr ukuya ku- / nl okanye / es kunye nezinye iilwimi.